ओलीलाई आयो सरकार ढाल्ने चेतावनी, अब के गर्लान प्रचण्ड ? — Sanchar Kendra
ओलीलाई आयो सरकार ढाल्ने चेतावनी, अब के गर्लान प्रचण्ड ?
काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै ज्यापु महागुठीले आज काठमाडौमा प्रदर्शन गरेको छ ।
काठमाडौंको बसन्तपुरबाट ज्यापु महागुठीलगायतका विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक संघ–संस्थाले गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरुले सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विधेयक खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले सरकार जनविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको, गुठी कब्जा गरेर कार्यकर्ताको पालनपोषणमा लागेको र भूमाफियाको बचाउ गरेको भन्दै विधेयक फिर्ता नगरे सरकार ढाल्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् । वसन्तपुरबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन न्यूरोड, टेकु, ठमेल, दरबारमार्ग, रत्नपार्क, शहिदगेट हुँदै पुनः बसन्तपुर पुगेर समापन भएको थियो ।
ओलीलाई सरकार ढाल्ने चेतावनी आएपछि प्रचण्डले कस्तो प्रतिक्रिया देलान भन्ने चासो सर्बत्र भएको छ । यसैबीच ‘गुठी विधेयक खारेजी अभियान’ले विधेयक खारेजीको माग गर्दै वसन्तपुरमा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको छ । अभियानका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीको अगुवाइमा धर्ना दिइएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले गुठी परम्परा सामन्तवादको अवशेष रहेकोले यसलाई समाप्त गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन् भने ८० भन्दा बढी गुठीरूले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी विगत ६ दिनदेखि राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आम नागरिकको भावनाविपरीत हुने गरी गुठी विधेयक पारित नहुने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले गुठी विधेयक बहसमा मात्रै आएकाले कानुन नै बने जसरी नबुझ्न आग्रह गरे।
‘हामी जनताको भावनाविपरीत कुनै काम गर्दैनौं, यदि आम नागरिकको सामाजिक र साँस्कृतिक भावनाविपरीत विधेयक देखियो भने त्यसलाई पारित गर्दैनौं,’पोखरेलले भने, ‘विधेयक छलफलका क्रममा आउने वित्तिकै कोही पनि आत्तिनुपदैन, अहिले नै कुनै कानुन बनेको होइन।’
सरकारले जनताको भावनाविपरीत कुनै काम नगर्ने बताउँदै संसदमा छलफलका क्रममा आएको विधेयककै कारण उत्पातै भयो भनेर नबुझ्न समेत उनले आग्रह गरे। जनताको भावना बुझेर मात्रै काम गर्ने भन्दै पोखरेलले सरकार जनताको हितविरूद्ध कहिल्यै नजाने दाबी गरे।